Kuguma Kwenyika​—Unokutya, Unokutarisira Kana Kuti Waneta Nokukumirira Here?
NYAYA IRI PAKAVHA Kuguma Kwenyika​—Unokutya, Unokutarisira Kana Kuti Waneta Nokukumirira Here?
SWEDERA PEDYO NAJEHOVHA ‘Makazvizarurira Vacheche’
BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU “Ndakazowana Rusununguko Chairwo.”
TEVEDZERA KUTENDA KWAVO “Kunyange Zvazvo Iye Akafa, Achiri Kutaura”
Ngwarira Kuti Usaita Godo!
Iti “Maita Basa”
Nharireyomurindi | January 2013
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Ndebele Ndonga Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
NYAYA IRI PAKAVHA: UNOFANIRA KUTYA KUGUMA KWENYIKA HERE?
Kuguma Kwenyika—Unokutya, Unokutarisira Kana Kuti Waneta Nokukumirira Here?
Unonzwa sei paunofunga nezvemusi wa21 December 2012, wainzi nevakawanda ndiwo waizochinja zvinhu munyika yose? Zvawaitarisira pamusi uyu zvinogona kunge zvakaita kuti uzorodzwe, uore mwoyo kana kuti ufinhikane. Kuti uku kwaivawo kumwe kurasika pakufungidzira zuva rekuguma kwenyika here?
Ko zvakadini ne“kuguma kwenyika” kunotaurwa muBhaibheri? (Mateu 24:3, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi) Vamwe vanotya kuti pasi redu richapiswa nemoto. Vamwe vanofarira kuona zvichazoitika panguva yemugumo. Vamwe vaneta nokuudzwa kuti mugumo wava pedyo. Asi nyika ichaguma zvechokwadi here? Chokwadi panyaya iyi ndechipi?
Ungashamisika paunonzwa zvinonyatsotaurwa neBhaibheri nezvekuguma kwenyika. Haringotipi zvikonzero zvokuti titarisire mugumo chete asi rinoratidzawo kuti vamwe vaizoona sokuti mugumo wanonoka uye vaizoneta nokumirira. Tinokukumbira kuti uongorore kuti Bhaibheri rinopindura sei mibvunzo inowanzobvunzwa nevanhu nezvemugumo wenyika.
Nyika ichaparadzwa nemoto here?
MHINDURO YEBHAIBHERI: “[Mwari] akavaka nheyo dzenyika panzvimbo dzayo dzisingachinji; haizozununguswi nokusingagumi, kana kuti nokusingaperi.”—PISAREMA 104:5.
Nyika haisi kuzoparadzwa nemoto kana kuti neimwe nzira. Asi Bhaibheri rinodzidzisa kuti nyika ndiwo musha wevanhu nokusingaperi. Pisarema 37:29 inoti: “Vakarurama vachagara nhaka yenyika, vachagara mairi nokusingaperi.”—Pisarema 115:16; Isaya 45:18.
Paakasika nyika, Mwari akati yakanga ‘yakanaka kwazvo’ uye achiri kuiona saizvozvo. (Genesisi 1:31) Pane kufunga nezvekuiparadza, ari kutovimbisa kuti achaparadza “vaya vanoparadza nyika,” uye haazoregi nyika ichiparara zvokusagadzirisika.—Zvakazarurwa 11:18.
Asi unganetseka nezvinotaurwa pana 2 Petro 3:7. Ndima iyi yeBhaibheri inoti: “Matenga nenyika zviripo iye zvino zvakachengeterwa moto.” Izvi hazviratidzi kuti nyika ichaparadzwa nemoto here? Chiripo ndechokuti mune dzimwe ndima dzeBhaibheri, “matenga,” “nyika” uye “moto” zvinofananidzira zvimwe zvinhu. Somuenzaniso, Genesisi 11:1 painoti: “Zvino nyika yose yakaramba iine mutauro mumwe chete,” shoko rokuti “nyika” rinenge richireva vanhu.
Mamwe mashoko ari pedyo neari pana 2 Petro 3:7 anoratidza kuti matenga, nyika uye moto zvinotaurwa mundima iyoyo ndezvokufananidzira. Ndima 5 ne6 dzinozvifananidza nezvakaitika paMafashamo emunguva yaNoa. Panguva iyoyo nyika yekare yakaparadzwa asi pasi redu rakaramba riripo. Saka Mafashamo akaparadza “nyika,” kureva vanhu vaiita zvechisimba. Akaparadzawo “matenga,” kureva vaya vaitonga vanhu vakaipa ivavo. (Genesisi 6:11) Saizvozvowo moto wakafanotaurwa pana 2 Petro 3:7 unofananidzira kuparadzwa zvachose kuchaitwa vanhu vakaipa pamwe nehurumende dzavo dzine uori.
Chii chichaitika pakuguma kwenyika?
MHINDURO YEBHAIBHERI: “Nyika iri kupfuura pamwe chete nokuchiva kwayo, asi uyo anoita kuda kwaMwari anoramba aripo nokusingaperi.”—1 JOHANI 2:17.
“Nyika” ichapfuura harisi pasi redu asi inoreva vanhu vari munyika vasingaiti zvinodiwa naMwari. Sezvingaitwa nachiremba anobvisa bundu rekenza pamurwere kuti amuponese, Mwari ‘achaparadza’ vanhu vakaipa panyika kuitira kuti vanhu vakanaka vasare vachinakidzwa neupenyu. (Pisarema 37:9) Saka “kuguma kwenyika” kunotova chinhu chakanaka.
Maonero aya akanaka nezve“kuguma kwenyika” anoratidzwa mune mamwe maBhaibheri ayo anoti “kuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho.” (Mateu 24:3; New International Version) Sezvo vanhu vakaipa vari ivo vachaparadzwa, zvine musoro kugumisa kuti nyika ichasara iripo iine vanhu vakanaka. Bhaibheri rinoratidza kuti izvi ndizvo zvichaitika nokuti rinotaura nezve“mamiriro ezvinhu epanguva inouya.”—Ruka 18:30.
Jesu akati nguva iyi ichauya inonzi ye“kuvandudzwa kwezvinhu zvose.” Panguva iyi Jesu achaita kuti vanhu vararame sezvaidiwa naMwari kubvira pakutanga. (Mateu 19:28, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi) Pashure peizvi, tichanakidzwa nezvinotevera:
Nyika inenge iri paradhiso, tisisina chokutya uye tisisina chatinoshaya.—Isaya 35:1; Mika 4:4.
Basa rinogutsa uye rinofadza.—Isaya 65:21-23.
Kurapwa kwezvirwere zvose.—Isaya 33:24.
Kudzorerwa pakuva vadukuzve kwevakwegura.—Jobho 33:25.
Kumutswa kwevakafa.—Johani 5:28, 29.
Kana tikaita “kuda kwaMwari,” kureva zvaanotiudza kuti tiite, hatifaniri hedu kutya kuguma kwenyika. Pane kudaro, tinogona kutokumirira nechido.
Ichokwadi here kuti nyika yava kuda kuguma?
MHINDURO YEBHAIBHERI: “Pamunoona zvinhu izvi zvichiitika, zivai kuti umambo hwaMwari hwava pedyo.”—RUKA 21:31.
Mubhuku rake rinonzi The Last Days Are Here Again, Muzvinadzidzo Richard Kyle akanyora kuti “kuchinja kwezvinhu nokukurumidza uye mhirizhonga zviri kuitika zvinoita kuti pave nemamiriro ezvinhu akafanotaurwa ekuguma kwenyika,” kunyanya kana kuchinja kwacho uye mhirizhonga zvanyanyisa.
Zvisinei, vaprofita vomuBhaibheri vakataura nezvemugumo vakanga vasiri kuedza kuratidza kuti nei zvakaipa zvaiitika munguva yavo. Asi vakafemerwa naMwari kuti vataure zvinhu zvaizoratidza kuti kuguma kwenyika kwava pedyo. Chimboona humwe uprofita hwacho, woongorora kana huri kuzadzika munguva yedu.
Hondo, nzara, kudengenyeka kwenyika, uye matenda anouraya.—Mateu 24:7; Ruka 21:11.
Kuwedzera kwekuparwa kwemhosva.—Mateu 24:12.
Vanhu vanoparadza nyika.—Zvakazarurwa 11:18.
Vanhu vanozvida, vanoda mari uye vanoda mafaro asi vasingadi Mwari.—2 Timoti 3:2, 4.
Kuparara kwemhuri.—2 Timoti 3:2, 3.
Kuramba uchapupu hwokuti mugumo wava pedyo kunoitwa nevakawanda.—Mateu 24:37-39.
Kuparidzirwa kwemashoko akanaka eUmambo hwaMwari munyika yose.—Mateu 24:14.
Sezvakafanotaurwa naJesu, patinoona “zvinhu zvose izvi,” ngatizivei kuti kuguma kwenyika kwava pedyo. (Mateu 24:33) Zvapupu zvaJehovha zvinodavira kuti uchapupu hwacho huri pachena uye vanoparidza vachiudza vamwe zvavanotenda munyika 236.
Tarisiro dzisiri dzechokwadi dzinoreva here kuti mugumo hauzombofi wakauya?
MHINDURO YEBHAIBHERI: “Chero panguva yavachati: ‘Rugare nokuchengeteka!’ kuparadzwa kusingatarisirwi kuchabva kwakurumidza kuvawira sokurwadziwa kwomukadzi ane pamuviri; uye havangambopukunyuki.”—1 VATESARONIKA 5:3.
Bhaibheri rinofananidza kuparadzwa kwenyika nekuuya kunoita marwadzo epamuviri nokuti amai vanototi varwadziwe chete uye marwadzo acho anongoerekana auya. Mazuva ekupedzisira anozotisvitsa pamugumo akafananawo nepamuviri, nokuti amai vane pamuviri vanoona zviratidzo zvakawanda zvinoratidza kuti vava pedyo nokusununguka. Chiremba wavo anogona kufungidzira kuti vachasununguka rinhi; asi kunyange zvikazononoka, amai vacho vanongoramba vaine chokwadi kuti mwana wavo achazvarwa nokukurumidza. Saka, kunyange zvazvo mugumo usina kuuya pawaitarisirwa nevamwe, izvozvo hazvirevi kuti ano haasisiri “mazuva okupedzisira.”—2 Timoti 3:1.
Ungabvunza kuti, ‘Kana chiratidzo chokuti tava pedyo nomugumo chiri pachena kudaro, nei vakawanda vasingazvioni?’ Bhaibheri rinoratidza kuti mugumo paunenge wava pedyo, vakawanda vachatofunga kuti uchapupu hwacho ndehwekutamba. Pane kuti vabvume kuti zvinhu zviri kuwedzera kuipa uye vari kurarama mumazuva okupedzisira, vaizoseka vachiti: “Kubvira pazuva rakarara madzitateguru edu murufu, zvinhu zvose zviri kuramba zvakaita sezvazvakanga zvakangoita kubvira pazvakatanga kusikwa.” (2 Petro 3:3, 4) Chiratidzo chemazuva okupedzisira chakajeka, asi vakawanda havana basa nacho.—Mateu 24:38, 39.
Nyaya ino yangokurukura humwe uchapupu hwemuMagwaro hwokuti mugumo wava pedyo. * Ungada here kudzidza zvakawanda? Kana zvakadaro, wadii kutaura neZvapupu zvaJehovha wobvuma kudzidza Bhaibheri usingabhadhari? Munogona kudzidzira kumba kwako, pane imwe nzvimbo yakakunakira, kana kuti kunyange parunhare. Chinongodiwa inguva yako chete, uye uchabatsirwa zvikuru.
^ ndima 39 Kuti uwane mamwe mashoko, ona chitsauko 9 chinoti, “Tiri Kurarama Mu‘mazuva Okupedzisira’ Here?” mubhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
ZVAPUPU ZVAJEHOVHA ZVAKAMBOTAURA NGUVA ISIRI IYO HERE YOKUUYA KWOMUGUMO?
Zvapupu zvaJehovha zvakambotaura nguva isiri iyo yokuuya kwomugumo. Sezvakamboitwa nevadzidzi vaJesu vepakutanga, Zvapupu zvaJehovha zvakambofunga kuti humwe uprofita hweBhaibheri hwaizozadzika pane imwe nguva. Zvisinei, zvavaifunga zvaipesana nenguva yaMwari. (Ruka 19:11; Mabasa 1:6; 2 VaTesaronika 2:1, 2) Tinobvumirana naA. H. Macmillan uyo akanga ava nemakore akawanda ari Chapupu chaJehovha paakati: “Ndakadzidza kuti tinofanira kubvuma patakakanganisa toramba tichidzidza Shoko raMwari kuti tiwedzere kurinzwisisa.”
Saka nei tichiramba tichiparidza kuti mugumo wava pedyo? Nokuti tinoziva kuti zvinokosha chaizvo kuteerera mashoko aJesu okuti: “Rambai muchitarira, rambai makamuka.” Kana tikarega kuparidza nezvemugumo, Jesu achatiwana ‘takarara’ uye haazotifariri. (Mako 13:33, 36) Nei asingazotifariri?
Funga muenzaniso uyu: Munhu anoita basa rokunyevera vanhu nezvemoto angaona hunenge utsi nechokure obva ataura kuti kwaita moto. Kunyange zvazvo angataura kuti kune moto iko kusina, kungwaririra kwake kunogona kuzoponesa upenyu hwevanhu.
Saizvozvowo, takambotaura nguva isiri iyo yokuuya kwomugumo. Asi tinonyanya kukoshesa kuteerera Jesu uye kuponesa upenyu hwevanhu pane kutya kutsoropodzwa. Murayiro waJesu wokuti ‘tipupure kwazvo’ unoita kuti tinyevere vanhu nezvemugumo.—Mabasa 10:42.
Hatifaniri kunyanyonetseka kuti mugumo uchauya riini asi tinofanira kuva nechokwadi chokuti uchauya chete, toita zvatinotarisirwa kuita. Hatiiti zvedambe nemashoko ari pana Habhakuki 2:3 anoti: “Kunyange kana [mugumo ukanonoka maererano nezvawaitarisira], ramba wakazvimirira; nokuti zvichatoitika chete. Hazvizononoki.”
January 2013 | Unofanira Kutya Kuguma Kwenyika Here?
NHARIREYOMURINDI January 2013 | Unofanira Kutya Kuguma Kwenyika Here?